HomeSuuqaZidane Oo Xaqiijiyey In Real Madrid Ay Si dhow ula socoto Xaaladda Raheem Sterling
Zinedine Zidane ayaa shaaciyey in kooxdiisa Real Madrid ay si dhow ula socoto xaaladda laacibka Liverpool ee Raheem Sterling, kaas oo gaashaanka ku dhuftay in uu qandaraaska u kordhiyo kooxdaas.
Zidane oo tababare ka ah kooxda heerka labaad ee Real Madrid ee loo yaqaano Castilla ayaa xaqiijiyey in kooxda Los Blancos ay dooneyso in ay ciyaartoygan hesho, si taas ay u xaqiijiyaana ay kormeer iyo la socosho isbeddeladda go’aamada ciyaartoygan ah ay ku jiraan.
“Tayada uu leeyahay iyo sida uu yahay Raheem si fiican ayaanu u naqaannaa, xaaladdiisana waanu la soconnaa. Waxa jira dhawr ciyaartoy oo ku fiican in ay Real Madrid u ciyaaraan, waana muhiim in aanu la soconno xaaladdiisa.” Sidaas ayuu yidhi Zidane.
Zidane waxa uu dib u xasuusiyey dadka qaabkii ay u mareen heshiisyadii ay kula soo wareegeen Isco iyo Raphael Varane, kuwaas oo uu sheegay in ka hor intii aanay heshiiskiisa u dhaqaaqin ay qiimayn ku samayn jireen sida ay tahay xaaladda iyo xidhiidhka ka dhexeeya kooxdooda.
“Waanu la socon jirnay Isco iyo Varane intii aanaan iibsanin. Bale ayaanu sidoo kale daawan jirnay, waananu la soconaa inta badan ciyaartooyada da’da yare e wanaagsan ee ka ciyaara horyaallada Yurub, marka aanu aragno in ay anfacayaan Real Madrid ayaanu u dhaqaaqnaa in aanu iibsanno.” Ayuu mar kale yidhi Zidane.
Raheem Sterling ayaa waraysi uu siiyey idaacadda BBC waxa uu ku sheegay in uu diiday in uu heshiiska u kordhiyo Liverpool, laakiin muu sheegin sababta ku kelliftay diidamada.
Ciyaaryahankan ayaa loo arkaa in uu ku jiro sannadkii ugu dambeeyey ee uu u ciyaarayo kooxda Reds, waxaana loo badinayaa in uu ku biiri doono Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United iyo Real Madrid midkood.
Wasaaradda Ciyaaraha Oo Qabatey Dood-cilmiyeed Ku Saabsanayd Caqabadaha Haysta Dhallinyarada
Sporting CP vs Juventus 1-1 – All Goals & Highlights